व्याडमिन्टनको उपाधि हंश र उत्तमलाई – Satabdi News
होमपेज / खेलकुद / व्याडमिन्टनको उपाधि हंश र उत्तमलाई
आइतबार, बैशाख २६, २०७८ , शताब्दी न्युज
बैशाख २६, मोरङ । मोरङ उलाबारी उर्ललाबारी संचालित प्रथम वडा स्तरीय नकआउट व्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि वडा नं. ५ का हंश फागो र उत्तम मगरले जितेका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै शनिबार सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइलनमा वडा नं. ३ का कृष्णराज गिरी र राजनहाङ लावतीलाई पराजित गर्दै फागो र मगरले उपाधि जितेका हुन् ।
You have reacted on "व्याडमिन्टनको उपाधि हंश र उत्तमलाई" A few seconds ago
नमूना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रममा सहभागीको लागी अनलाईन फर्म दर्ता शुरु